कोरोना जितेकी महिलाको अनुभव
अप्रत्याशित आएको खबरले चन्द्रागिरी नगरपालिका– ९ की ३३ वर्षीया एक महिला आश्चर्यमा परिन् । जुन खबरप्रति उनलाई विश्वास नै थिएन । अझै पनि उनलाई विश्वास छैन । तर, त्यही खबरलाई विश्वास नगर्नुको उनीसँग विकल्प पनि थिएन । छैन पनि ।
३० वैशाख उनका लागि कालो दिन बन्यो । जुन लयमा उनका पाइला अगाडि बढेका थियो । त्यसमा ब्रेक लाग्यो । एकाएक उनको जीवनले अर्कै मोड लियो । कारण कोरोना भाइरस कोभिड –१९ ।
कहाँबाट कोरोना भाइरस सर्‍यो उनलाई थाहा छैन । तर, उनको रिपोर्टमा पोजिटिभ देखियो । उनी कोरोना संक्रमितको सूचीमा परिन् ।
९ दिनको अस्पताल बसाइपछि कोरोना भाइरसलाई जितेर बिहीबार शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुबाट उनी डिस्चार्ज भएकी छन् । तीनै महिलाले ९ दिनको आइसोलेसन बसाइको अनुभव हामीसँग साटेकी छन् ।
उनको अनुभव जस्ताको तस्तै :
२ महिनाअगाडि देवरको व्रतबन्धमा कञ्चनपुर गएकी थिएँ । १७ चैतमा व्रतबन्ध थियो । तर, ११ गते नै लकडाउन भयो । लकडाउनपछि न व्रतबन्ध भयो । न काठमाडौं नै आउन पाइयो । मात्र झमेलामा फसियो ।
त्यसपछि २ महिना उतै बस्यौँ । लकडाउन लम्बिन थाल्यो । यता घरमा आउनुपर्ने भयो । काठमाडौं आउनुअगाडि नेपालगञ्ज आयौँ । नेपालगञ्जमा सुरक्षित ठाउँमै बसेका थियौँ । त्यहाँबाट २९ वैशाखमा काठमाडौं आयौँ ।
भाइरस विश्वभर आगोसरि फैलिएको थियो । मनको सन्तोषका लागि परीक्षण गर्न टेकु अस्पताल गयाैँ । सँगै बच्चा पनि थिए । सबैको स्याम्पल दिएर चन्द्रागिरी नगरपालिका –९ स्थित घरमा आयौँ ।
भोलिपल्ट ३० गते रिपोर्ट पोजिटिभ आएछ । नराम्रानराम्रा हल्ला चल्न थाले । अनेक न्यूज आउन थाले । अस्पतालबाट फोन आयो, ‘तपाईंको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ ।’
मलाई पत्यार नै लागेन । म ढुक्क थिएँ– रिपोर्ट नेगेटिभ आउँछ भन्नेमा । तर, अस्पतालबाट फोन आउँछ रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भनेर ।
अचम्ममा परेँ । न कुनै लक्षण छ । न केही समस्या । परिवारबाहेक अरुसँग सम्पर्क नै छैन । कहाँबाट कसरी सर्‍यो थाहै छैन । परिवारका अरुलाई पोजिटिभ देखिएन, मलाई कसरी देखियो ? अनि त्यही दिन राति एम्बुलेन्स लिन आयो । राति १० बजे टेकु गएँ ।
टेकु गएपछि आइसोलेसनमा एक जनाका लागि एउटा रुम रहेछ । कुनै लक्षण थिएन, त्यसैले मलाई कोरोनाको डर र त्रास कत्ति पनि थिएन । मात्र एउटा चिन्ता अस्पतालमा कति दिन बस्नुपर्ने हाे भन्ने थियो ।
आइसोलेनमा बस्दा सामाजिक सञ्जाल चलाउने, न्यूज हेर्ने, घरपरिवारसँग कुरा गर्ने, बेलाबेलामा ज्वरो नाप्ने, यसरी नै दिन बिताउन थालेँ । मलाई घरमै बसेको जस्तो भयो ।
एक्स–रे गर्न, स्वाब निकाल्न डाक्टर नर्स आउनुहुन्थ्यो । उहाँहरूसँग कुरा हुन्थ्यो ।
आइसोलेसनमा बसेर न्यूज हेर्थें । घुम्न गएकी थिई । यहाँ गएको, उहाँ गएको यस्तो गरेको भनेर न्यूज आयो । त्यो बेला मलाई कोरोनाको भन्दा फेक न्यूज आएको देख्दा दु:ख लाग्यो ।
कसैसँग मेरो रिसिबी पनि थिएन । किन त्यस्ता न्यूज आए ? म आफैँ छक्क परेकी छु । म कतै घुम्न रमाइलो गर्न गएकी पनि होइन । म त पारिवारिक कामले गएकी थिएँ ।
यो रोग मैले ल्याएको पनि होइन । विश्वभर फैलिएको हो । कतिले मलाई घृणा पनि गरे । घृणा गर्ने तीव्यक्तिलाई पनि भोलि कोरोना लाग्न सक्छ । त्यो बेला उसलाई अरुले पनि घृणा गर्लान् । त्यसैले म भन्छु– कसैले कसैलाई घृणा नगरौँ ।
यो रोग लागेर मरिहालिन्छ भन्ने पनि त होइन । त्यसको उदाहरण म आफैँ हो । यो सामान्य रोग हो । त्यसैले म निको हुन्छु भन्नेमा ढुक्क थिएँ । अझ मलाई त कोरोना नै थिएन भन्ने लाग्छ ।
४ जेठमा फेरि जाँच गराए । ६ गते रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । त्यो पल धेरै खुसी भएँ । तर, ४–५ दिनमै रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । पहिलो परीक्षण गलत भएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ । नत्र यति छिट्टै कसरी रिपोर्ट नेगेटिभ आयो ?
काठमाडौं आउने क्रममा बाटोमा खाजा पानी किन्दा सरेको पनि हुन सक्छ । जे भए पनि रिपोर्टमा जे आउँछ, त्यसैलाई मान्ने हो । कोरोना लाग्दैमा आत्तिनुपर्ने पनि रहेनछ ।
९ दिनमै निको भएर घर फर्किएकी छु । अब १४ दिनपछि अस्पतालबाट फोन आउँछ । त्यसपछि फेरि परीक्षण होला । यो कुनै अपराध होइन । सामान्य रोग हो । संक्रमितलाई घृणा र तिरस्कार नगारौँ । महामारी हाे, जोकोहीलाई पनि लाग्न सक्छ । कति संक्रमित अहिले पनि आइसोलेनमा हुनुहुन्छ ।
फेक न्यूजले बढी मानसिक तनाव दिन्छ । त्यसैले सत्यतथ्य बुझेर लेख्नुहोला । जसले राम्रो लेख्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद । जसले नराम्रो लेख्नुभयो, उहाँहरूप्रति पनि गुनासो छैन ।
राम्रो खबर लेख्ने हो भने संक्रमितलाई हौसला पनि मिल्छ । रोग पनि छिटो निको हुन्छ । आइसोलेसनमा हुनेहरू नआत्तिनुहोस् । आत्मबल बढाउनुभयो भने तपाईंले पनि मैले जस्तै कोरोनालाई जित्नुहुनेछ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ ९, २०७७, १६:१४:००